Mabhisikiti uye maKuki maFekitori - China Mabhisikiti uye Makuki Kugadzira, Vatengesi
Mwedzi keke chigadzirwa chebheka cheChinese chinodyiwa panguva yeMid-Autumn Festival. Mhemberero ndeyekutenda kwemwedzi uye Kuona kweMwedzi, uye makeke emwedzi anoonekwa seanokosha kwazvo. Makeke emwedzi anopiwa pakati peshamwari kana pakuungana kwemhuri vachipemberera mutambo.
Tinogona kukupa marudzi mazhinji emakeke emwedzi, senge shanu-kernels mwedzi keke, zai yolk mwedzi keke, lotus peta keke yemwedzi, bhinzi nyanya mwedzi keke, Canton dhizaina mwedzi keke, nezvimwe.
Sesame mafuta, itsika inonaka yemafuta emiriwo muChina. Inotorwa kubva kune mbeu yesesame uye ine hunhu hwakasimba hweiri-yekutsvaira sesame. Sesame mafuta ine yakachena kuravira uye yakareba yekupedzisira kuravira. Mwaka wakakosha muhupenyu hwezuva nezuva. Kunze kwekushandiswa semafuta ekubikisa, unoshandiswa sekunatsiridza zvinonaka mumakicheni mazhinji, uine hwema hunonaka uye hwerunako. Kunyangwe iri ndiro inotonhora, ndiro inopisa kana muto, inogona kunzi sitiroko yezuva
Yedu Yemuriwo bhisikiti rakatenderedzwa rakagadzirwa kubva kune yekutanga organic furawa, ivhu neyakagadziriswa yakasarudzwa yeAustralia gorosi, pamwe nemiriwo mizhinji yemiriwo. Nezvigadzirwa zvemberi zvekugadzirisa uye matekinoroji akaisvonaka epasi-mafuta bhisikiti rakaoma, yakaderera mumafuta uye yakakwira mucalcium uye chikafu chimiro chikafu chakagadzirwa.It yakapfuma muzvinhu zvakasiyana siyana zvinodiwa nemuviri wemunhu. Vatengi vanokwezva nerudzi rwayo rukuru, crispy uye kuravira kwemuriwo. Uye zviri nyore kutakura uye kuchengetera payo diki uye yakanaka pasuru. Uye isu tinokwanisa kugadzira mavhenji matsva akasiyana akateedzana zvinoenderana nevatengi 'uye misika' zvinoda.
Butter uye Cheese Biscuit Zvimiti
Yedu Bhata uye Cheese Biscuit Sticks inogadzirwa kubva kune yekutanga organic furawa, pasi neyakagadziriswa yakasarudzwa yeAustralia gorosi uye Zelanian butter. Nezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye nehunyanzvi tekinoroji, iri crispy uye ine yakafuma chizi kuravira. Vatengi vanokwezva neayo mafashoni mapakeji uye vanogona kugovana neshamwari kana vaine mapato kana parwendo pamwe chete.
Butter makuki anowanzo kuzivikanwa seDanish chimiro bhotera makuki, ayo anonyanya kushandiswa mumwaka weKisimusi. Yedu Bhata Cookie inogadzirwa kubva kune premium mbishi zvinhu uye bota. Iyo yakabikwa neyechinyakare matekinoroji uye mafomula, izvo zvinoita kuti inakidze yakachena, yakasviba, inotsvedza uye inonaka. Chikamu chimwe nechimwe chine goridhe rakakwana. Tinogona kuwedzera yogati, mukaka uye chokoreti zvinoenderana nezvikumbiro zvakasiyana zvevatengi zvekuita makuki ezvinonhuwira zvakasiyana. Inogona kuve chipo chakanaka cheKisimusi, zuva rekuzvarwa kana chiitiko chegore, nezvimwe.
Product Rudzi: Bhisikiti rakaoma
Zvinoshandiswa: Poda yegorosi, shuga yakakangwa, mafuta enzungu, zai nyowani, hupfu hwemukaka, zvekuwedzera zvekudya (sodium hydrogen carbonate, ammonium hydrogen carbonate, sodium metabisulphite), calcium carbonate.
Flavour: Chekutanga / Calcium-Milk Biscuit yevakuru
Specification: 54g * 80 mabhegi / CTN
225g * 24 mabhegi / CTN
Package: Mabhegi emukati, ekunze emakatoni. (Makatoni e1000 pamudziyo wechiremba 20.)
Pasherufu hupenyu: 8 Mwedzi
Kuchengetedza: inotonhorera uye yakaoma nzvimbo，dzivisa kupisa kwakanyanya，zuva rakananga kana nzvimbo dzine hunyoro.
Certifiketi: HACCP, ISO9001: 2015, ISO22000: 2005
Aya alfabhethi / mabhisikiti akaumbwa nemhuka anozove ndangariro dzakanaka dzehuhwana hwako. Vaizodzidza ruzivo rwekutanga nekunakidzwa nemabhisikiti anonaka. Zvigadzirwa zveGreat Value zvinopa mhuri zvinodhura, zvemhando yepamusoro grocery uye sarudzo dzemumba dzinoshandiswa. Nemhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa, tinokupa iwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvemusika wako.
Vana bhisikiti mune can
Zvinoshandiswa: Hura yegorosi, Granulated Shuga, Peanut Oiri, Mafuta ePalm, Mazai Matsva, Mukaka Upfu, Ammonium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Sodium Metabisulfite, Calcium Carbonate, Niacin, Zinc Gluconate, Sodium ferric ethylenediamine tetrarate, chikafu chinodyiwa.
Flavour: Chekutanga / Nungu / Karoti
Specification: 80g * 12 magaba / CTN
Package: Midziyo Yemukati, ekunze Makatoni. (1200 makatoni pa20 GP mudziyo.)
Kuchengetedza: inotonhorera uye yakaoma nzvimbo，dzivisa zuva rakananga.
Zvisungo: hupfu hwegorosi, mafuta emuchindwe, zvinodyiwa gorosi bran, zvinowedzerwa zvekudya (maltitol mvura, xylitol 5%, ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), yakazara mazai emvura, sesame, chinodyiwa chibage starch, oatmeal, inodyiwa munyu.
PRoduct mhando: Crisp bhisikiti
Flavour: Chekutanga / Xylitol
Specification: 365g * 16 mabhegi / CTN (Akazvimirira madiki mabhegi mukati)
Pasuru: Mabhegi emukati, makatoni ekunze (akakomberedza mazana matanhatu emakatoni pa20GP mudziyo)
Pasherufu hupenyu: Mwedzi 12
Certifiketi: HACCP, ISO9001: 2015
Zviyo zvishanu zvinoreva sesame nhema, chena sesame, nzungu, bhinzi nhema uye oats. Nezvigadzirwa zvemberi zvekugadzira uye hwakanakisa matekinoroji eepasi-mafuta bhisikiti rakaoma, yedu Shanu Zviyo Bhisikitsi yakaderera mumafuta uye yakakwira mucalcium uye chikafu chimiro zvigadzirwa mbishi. Vatengi vanokwezva neayo akanaka chitarisiko, crispy magadzirirwo uye akapfuma zviyo kuravira. Uye zviri nyore kutakura nekuchengetedza nekuda kwemapakeji madiki emunhu. Uye isu tinokwanisa kugadzira mavhenji matsva akasiyana akateedzana zvinoenderana nevatengi 'nemisika' zvinoda, saka maOEM odhi anogamuchirwa.
Yese zviyo mabhisikiti, sezita zvarinoratidzira, iri mubhasikiti akawedzera gorosi bran, zviyo zvakakora, hupfu hwegorosi uye zvimwe zvigadzirwa, kuitira kuti chikafu chemafibha chebhisikiti chiwedzere zvakanyanya. Uye isu tinokwanisa kugadzira mavhenji matsva akasiyana akateedzana zvinoenderana nevatengi 'uye misika' zvinoda. Diversified specification uye mapakeji anowanikwa kune ako akasiyana zvirevo. Kanda zvaunoda, uye zvimwe zvese zvisiyire isu.
Kudya Nzungu Dzakarungwa, Vana Mabhisikiti, Ladyfinger Cookie, Soy Sauce Mapaketi, Mutsva Bean Curd Stick, Hawthorn Strip,